अब उडिरहेको बिमानमै सहवासको सुविधा – Ekathmandunepal
Homeपत्याउनै गाह्रोअब उडिरहेको बिमानमै सहवासको सुविधा
२८ मंसिर २०७४, बिहीबार ११:४४ ekathmandu Nepal पत्याउनै गाह्रो 0
आजकल अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरु यात्रुलाई राम्रो भन्दा राम्रो सुविधाहरु दिएर आकषिर्त गर्न लागिपरेका छन् ।यो भिडमा एउटा यस्तो एयरलाइन्स कम्पनी पनि छ जसले आफ्ना यात्रुलाई यौन सम्पर्क राख्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ । तपाइँले सोँच्नुहोला, आखिर यो कसरी सम्भव छ ? यस्तो अफर यात्रुलाई जहाजमै प्राप्त हुन्छ की जहाज अवतरण भैसकेपछि ?
अमेरिकाको प्राइभेट एयरलाइन्स कम्पनी फ्लेमिंगो एयरले आफ्ना यात्रुलाई यो अफर प्रदान गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०१३ मा माइल हाई क्लब नामबाट यो सेवा सुरु गरेको हो । यो सेवा प्राप्त गर्नका लागि यात्रुले जोडीको ४९५ डलर शुल्क तिर्नुपर्दछ ।
कम्पनीले बितेका वर्षहरुमा हजारौँ जोडीहरुलाई सहयोग गरिसकेको फ्लेमिंग एयरका सिइओले जनाएका छन् । आखिर यो अफर कसरी प्राप्त हुन्छ ? यसमा प्राइभेट प्लेजमा बीचको सिट हटाएर एउटा बेड बनाइएको छ । जहाज उडाउने एक पाइलट पनि अगाडि हुन्छन् । फ्लेमिंगोको सिको गर्दै अमेरिकामा अन्य वायुसेवा कम्पनीले पनि यस्तो सर्भिस सुरु गरेका थिए । तर त्यो रोमान्सको साटो केवल शारीरिक सम्बन्ध बनाउने कुरामा मात्र आधारित रह्यो ।
सन् २०१६ देखि फ्लेमिंगोलाई अर्को कम्पनी लभ क्लाउडलाई टक्कर दिइरहेको छ आफ्नो गज्जबको सेवाका कारण । लभ क्लाउडले नयाँ जोडीका अलावा पाका जोडीहरुलाई पनि आफ्नो सेवा दिन्छ । साथै विवाहको वर्षगाँठ आदिमा पनि यसमा विशेष व्यवस्था हुन्छ । एजेन्सी | अनलाइन खबर
मैले मेरो २० बर्से दिदी सँग यसरी रात बिताएको थिए… (49)
बुढाको भन्दा त तपाईंको ठुलो रहेछ (41)
सानिमालाई सेक्सको प्रस्ताव राख्दा… (12)
स्तन र योनी कत्रो हुनुपर्छ ? (12)
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (9)
भर्जिन केटीलाई घरमा अर्धनग्न भेट्दा…. (9)
खुट्टा फर्किने भनेको के हो ? किन फर्किन्छ खुट्टा ? (8)
म बाहिर हेर्दा खुसि छु तर मिठो सेक्स कहिले भएन- के… (7)
एक कोरियन युवतीको योनीको रौ फालिदि गरेको दृश्य… (5,459)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,360)
घरबेटी दाइले जबर्जस्ती मेरो रातो पेन्टी भित्र हात छिराए (3,225)
बहिनी भनेर के गर्नु , खाली अगाडि आएर तिघ्रा देखौने ,… (2,569)
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको… (2,373)
दिदी अब त अति भयो यो भाईको भाईलाई अब स्वर्गको बाटो… (2,364)
मेरो होल नाइट’ ! युवा र युवतीले एकचोटी पढ्नै पर्ने… (2,332)
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (2,203)
राजा मलाई कुकुरले गरेको जसरी गर न कस्तो मज्जा आउछ (2,200)
तिर्सना बुढाथोकी अर्को उपर्दो नाङ्गै नुहाउदा नुहाउदै… (2,015)
“भाउजु, कति दिन तड्पेर बस्नुहुन्छ ? आज म तपाईंको… (1,951)